अर्थ – Page 11 – Nayadhar
५ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु
पाल्पा । पाल्पाका पाँच वटा स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । स्थानीय स्तरमै सरकारले स्वरोजगारको कार्यक्रम सुरु गरेपछि स्थानीय युवा तथा एकल महिलाहरू खुसी भएका छन् । तानसेन नगरपालिकामा रोजगार पाउँ भनी १ हजार ३ सय ७० जनाले निवेदन दिएका थिए । जसमध्ये १ सय ८५ जनालाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी आइतबारदेखि रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको तानसेन नगरप्रमूख अशोककुमार शाहीले बताए । १४ वटा वडाबाट तत्कालका लागि अपाङ्ग, एकल महिला र विदेशबाट फर्किएका युवा गरी १...
काठमाडौं । कृषकले पछिल्लो समय कागतिको व्यवसायिक रुपमा खेती गर्न थालेकाछन् । कागती रसमा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइने हुनाले स्वास्थ्यको लागी अत्यन्तै महत्वपूर्ण फल हो । यसैले स्वास्थ्य उपयोगि कागती खेती कहिले कुन महिनामा कसरी गर्ने भनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले तयार पारको केहीे महत्वपूर्ण टिप्सहरु निम्न प्रकारका छन् ।१- कागतीको विरुवा रोप्न के कस्तो तयारी गर्नु पर्छ ? कागती सम्बन्धी विज्ञको सल्लाह लिई रेखाङ्कन गरि विरुवा र...
पाल्पा ।हामीकहाँ यस्ता थुप्रै खानेकुरा छन्, जसले अपेक्षित व्यापकता पाउन सकेको छैन । तपाईं सुदूर पूर्वको कुनै गाउँमा पुग्नुहोस् वा पश्चिमको दूर-दराजमा । केही न केही रैथाने परिकारको स्वाद फेर्न सक्नुहुनेछ । त्यहीका उत्पादनबाट, त्यहीका चुल्होमा पाक्ने खान्कीको स्वाद तपाईंले अन्यत्र फेला पार्न सक्नुहुन्छ । यस्ता थुप्रै रैथाने परिकार छन्, जसले हाम्रो जिब्रो लोभ्याउँछ । एक पटक चाखेपछि मन अघाउँदैन । चुकाउनी के हो ? चुकाउनी खासमा अचार हो । भात, चिउरा, रोटी आदिसँग खान सकिन्छ । च...
पाल्पा । पूर्वखोला गाउँपालिका–४, देवीनगरस्थित काफलडाडामा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । स्थानीयबासिन्दा मणि सिकेले दश लाख लगानीमा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् । भारतमा सिकेको सीपबाट अहिले घरमा नै गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपछि स्थानीयबासिन्दाहरुले गाउँमा रोजगारीको अवसर जुटेको छ । कपडा सिलाउने माग बढेपछि पाँच सात जनालाई गाउँमा काम गर्ने अवसर मिलेको हो । गार्मेन्ट उद्योगमा टिसर्ट, टयागसुट, आउटर, जागे लगायतका कपडा उत्पादन हुने सिकेको भनाई छ । मणि सिकेका...
रिब्दीकोट गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ
पाल्पा । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ । स्थानीय तहमा रहेको बेरोजगार युवाहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत उनीहरुलाई रोजगार प्रदान गरिएको । रोजगार पाउने व्यक्तिहरुलाई आवश्यक सामाग्री समेत पूर्व उद्योगमन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेय, प्रदेश साँसद वीर बहादुर राना, रमा घर्ती, पूर्वसाँसद यादव बहादुरले हस्तान्तरण गरेर कार्यक्रम शुभारम्भ भएको थियो ।
पाल्पाका कुन स्थानीय तहलाई कति अनुदान ? हेर्नुस् सूची
पाल्पा । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष 2076\_77का लागि सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशका लागि उपलब्ध गराएको अनुदान सार्वजनिक गरेको हो । पाल्पाका दशै ओटा स्थानीय तहमा वित्तिय समानीकरण अनुदान, शसर्त अनुदान रहेको छ ।
समस्याको चाङ्ग माझ उदाहरणीय एकल महिला
पाल्पा । नेपाली समाजमा एकल महिलाहरु पिडा सहेर जीवन बिताउन बाध्य छन् । एकल महिला भएकै कारण आर्थिक, राजनैतिक सामाजिक–साँस्कृतिक अवसरबाट बञ्चित छन् । निरन्तर मेहनत र पसिना बगाएरमा एकल महिलाहरु पनि सक्षम बन्छन् भन्ने यो उदाहरण हो । पाल्पा जिल्ला बगनासकाली गाउँपालिका बराङदीकी तुल्सी गैरेको तानसेन मेहलधारामा हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र छ । हस्तकलामा क्रिष्टल माला, औठी, टप, चुरा, गुडिया तथा खेलौना उत्पादन हुन्छ । श्रम र पसिना खर्चेर दुई चार पैसा कमाउन सकिने अनुभव सुनाइन । हस्तकलामा उ...
पाल्पा । बगनासकाली गाउँपालिका–७, का कहलाबारीका धनबहादुर क्षेत्री गाउँघरमा रोजगार र स्वरोजगारका लागि सम्भावना नदेखेपछि विदेश पलायन भए । विदेशको भूमिका १३ वर्षसम्म श्रम र पसिना बगाए । कमाई र मान सम्मान राम्रो भएपछि परिवार छाडेर विदेशी भूमिमा श्रम गर्दा मनमा घरपरिवारको यादले सताउन थाल्यो । यूएइमा नेपालीहरुको हितमा काम गर्ने पाल्पाली समाज युएई संस्था खोले । पछि सो संस्थाका क्षेत्री महासचिव पदमा समेत पुग्ने अवसर मिल्यो । पैसा कमाउन परिवार छाडेर विदेशमा पुगेपछि सो संस्था मार्फत पाल...
बजेट भाषणले ज्येष्ठ नागरिकमा उत्साह
पाल्पा।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संयुक्त संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा हाल दिइँदै आएको भत्तामा मासिक एक हजार रुपियाँका दरले वृद्धि गरेको हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाको भत्ता मासिक दुई हजारबाट वृद्धि गरेर प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपियाँ पु¥याइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमअनुसार हाल ज्येष्ठ नागरिक तथा...
पाल्पा, १३ जेठ । जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिका–२ ढाबखोलास्थित रानी झरना र तल निलो आकर्षक पोखरी छ । प्राकृतिक रूपमा रहेको झरना र पोखरीले आन्तरिक पर्यटनलाई लोभ्याउँछ । करीब १० वर्षअघि मात्र स्थानीय बासिन्दाले झरना र पोखरीका विषयमा थाहा भएको हो । घाँसदाउरा गर्ने मानिसले देखे पनि यसको प्रचारप्रसार हुन नसक्दा ओझेलमै रहेको थियो । करीब ५० मिटर माथिबाट झरना बगिरहेको छ । वरपर हरियाली जङ्गलको बीचमा भागमा रहेको झरना क्षेत्रमा पुग्दा शान्त र प्राकृतिक रूपमा आनन्द मिल्छ । चैत वैशाखको गर...